दिवाकर भट्टराई, (दमौली, तनहुँ)
हरप्रहर साथ भैगो, रात समर्पण छ !<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
रात संगै अनेकन, बात समर्पण छ !
लोलाएका गगन चुम्वि, अर्धनयनले
उब्जिएका बैसको, मात समर्पण छ !
सारथी बनि, जिन्दगीको यात्रा अब
अनन्त गोरेटोमा, हात समर्पण छ !
थाहा छैन भविष्य, कस्ले देख्छ खै
कहिल्यै नटुट्ने, साथ समर्पण छ !
भएन हो दिवाकर जी अव त लेखनमा सुधार गर्नु प¥यो । समय र अवस्था कहाँ पुगी सक्यो तपाइ परिवर्तन भएको खै रु रचना त्यही अनुसारले समय बोल्नुप¥यो